Social CRM: Social Media na Ahịa Mmekọrịta Management
EBook n'efu: Moga na Social CRM
Tuesday, May 31, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa bụ isi ihe nye ọtụtụ òtù dị iche iche, na-enye ha ọgụgụ isi nke ndị ahịa na data ha chọrọ iji nwee mmekọrịta dị mma na ndị ahịa ha. Yertọ mgbasa ozi mmekọrịta n’elu ọrụ mmekọrịta gị na ndị ahịa nwere ike ime ka ọrụ ụlọ ọrụ gị rụọ ọrụ ngwa ngwa wee wulite mmekọrịta mmekọrịta siri ike karị - na-eme ka ị nwekwuo ohere ị ga-eji kpọtụrụ ndị ahịa n’azụ usoro na iwu obodo.
Emailvision weputara Social CRM maka Dummies, ebook n'efu nke ga - enyere ụlọ ọrụ aka ịghọta ihe dị iche na etiti Social CRM na CRM yana otu esi akwado mmekọrịta mmadụ na ibe ha na CRM.
Site na akwụkwọ: Social media na ịkparịta ụka n'networkntanet agbanweela akụ na ụba ụwa ka ọ bụrụ ihe dị ka obere ahịa obodo, ebe mkpọtụ obodo, ọ bụghị ahịa ahịa, na-ekpebi ma azụmaahịa ọ na-eto ma ọ bụ na ọ daa. Social CRM bụ nzaghachi azịza maka ọnọdụ azụmaahịa ọhụrụ a. Na Social CRM:
Ihe a na-elekwasị anya bụ na obodo na mmekọrịta mmekọrịta.
Via ebe mmekọrịta, gụnyere Facebook na Twitter, ndị ahịa nwere ma jikwaa mkparịta ụka ahụ.
Nkwukọrịta bụ azụmaahịa na-azụ ahịa kamakwa ndị ahịa na ndị ahịa na ndị ahịa.
Ndị ahịa na-ejikọ aka na azụmaahịa ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi iji melite ngwaahịa, ọrụ, na ahụmịhe ndị ahịa.
Mkparịta ụka adịchaghị mma ma nwekwuo “ezigbo”, na-ebugharị site na ika na-agwa ndị obodo okwu.
EBook na-enye ozi niile dị mkpa - site na ịmepụta usoro, ịhọrọ teknụzụ ziri ezi, otu esi eme ka teknụzụ, ịzụ ndị ọrụ gị, nyocha nsonaazụ - ụzọ niile iji zere ọnyà ndị nkịtị.
Ngosipụta zuru ezu: Enwetara m nsụgharị mbu nke eBook ma dee nkwanye maka ya. Emailvision abụrụla onye ahịa nke DK New Media .
SmartDocs: Jikwaa Microsoft Word Repository
The Domino Project: Tụkwasị Onwe Gị Aka Writde Ihe
Aug 10, 2011 na 7:58 PM
nnukwu isiokwu! elekọta mmadụ CRM bụ n'ezie na elu na elu. Nụla banyere GreenRope? Ọ na - enye gị ohere ijikwa CRM gị na ihe ọ bụla na otu dashboard.